म अत्यन्त लज्जित छु ‍‌: डा बाबुराम भट्टराई « Khasokhas Follow @khasokhasmag
म अत्यन्त लज्जित छु ‍‌: डा बाबुराम भट्टराई
म आज अत्यन्त लज्जित छु । जीवनका ४० वर्ष मैले यो देशमा निरंकुशताका विरुद्ध, निर्दलीयताका विरुद्ध लोकतन्त्र ल्याउनका निम्ति २०४६/०४७ सालसम्म लडें । त्यसपछि नेपालमा अझै लोकतन्त्र पूर्ण भएन गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर उचाइमा पुर्‍याउनका निम्ति लड्यौं । तर मेरै पूर्वसहयोद्धा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जुन उपहास देखियो त्यसैले म अत्यन्तै लज्जित छु ।
मैले तपाईं सञ्चारकर्मीहरुमार्फत नेपालीहरुलाई र संसारलाई बताउनुपर्छ नेपालमा सही अर्थमा लोकतन्त्र आएको रहेनछ । बहुदलीय व्यवस्था पनि सही अर्थमा आएको रहेनछ । जनताका अधिकार, विधिको शासन, मानवअधिकार केही पनि आएको रहेनछ भन्ने प्रत्यक्ष अनुभुति मैले गरेको छु । पञ्चायती व्यवस्थामा निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनाव लड्छु भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नदिएर के हालत भएको थियो हामीलाई थाहा छ । अन्त्यमा नेपाली कांग्रेसको एउटै माग थियो – साझा चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न देऊ ।
पञ्चायती व्यवस्थाभित्र पनि चुनाव लड्छु भन्दाखेरि त्यतिखेरका पञ्चायती शासक, राजतन्त्रवादी शासकहरुले नदिएर हामीले ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको थियो । तर अहिले आएर हामीलाई संविधानले दिएको अधिकारको विपरित अत्यन्त गुपचुप तरिकाले षड्यन्त्रमूलक तरिकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ जारी गरेर त्यसको दफा २६ को उपदफा (६) र (७) मा अहिले संसद्मा भएका बाहेकका अरु दलहरुलाई निर्वाचन चिन्ह नदिने, अर्थात अरु दलको अस्तित्व समाप्त पार्ने भन्ने जुन निर्णय गरियो त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति नै हो, मण्डलेतन्त्रको पुनरावृत्ति नै हो । त्यसअर्थमा मलाई अत्यन्त लज्जाबोध भएको छ ।
हामीले त्यसको विरोध गर्नु हाम्रो अधिकारको कुरा थियो, त्यसैले निर्वाचन आयोगमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिन आज हामी जम्मा भएका थियौं । हामीलाई धर्ना दिन दिनुपर्‍थ्यो, दिइएन । धेरै परदेखि नै हामीलाई रोक्ने प्रयत्न गरियो । निषेधित क्षेत्र भनेर अनावश्यक ढंगले बल प्रयोग गरिसकेपछि हामीले त्यो क्षेत्र तोडेकै हो, त्यसपछि हामीलाई गिरफ्तार गरियो । हामीले भन्यौं – गिरफ्तार गर, कुनै बल प्रयोग नगर, हामी पनि गर्दैनौं । त्यसपछि हामीलाई पहिले महाराजगञ्ज लगियो, पछि नेपाल पुलिस क्लबमा ल्याएर राखियो ।
साँझमा मैले गृहमन्त्रीसँग कुरा गरेर सोधें – तपाईंले हामीलाई किन ल्याउनुभएको हो ? अहिलेसम्म कसैले जानकारी दिएको छैन, हामीले के अपराध गरेको हो ? निषेधित क्षेत्र त हामीले तोडेकै हो त्यसवापत ल्याएको हो भने निषेधित क्षेत्र तोड्दाखेरि कुन कानुन अनुसार कति सजायँ हुन्छ त्यसको पुर्जी हामीलाई थमाउनुपर्‍यो र तपाईंले अदालतमा पेश गर्नुपर्‍यो । त्यो केही पनि भएको छैन । हाम्रो सोधपुछ र बयान पनि लिइएको छैन र अदालतमा लैजाने प्रक्रिया पनि छैन । उल्टै साथीहरुलाई अत्यन्त अपमानजनक व्यवहार गरिराखिएको छ भनेर मैले भनें ।
गृहमन्त्रीले भन्नुभयो – हैन तपाईंहरु गइदिनुपर्‍यो, छोडिदिनुपर्‍यो ।
ल हामी जाउँला तर जानुभन्दा पहिले तपाईंले हामीलाई बताइदिनुपर्‍यो हामीले के अपराध गरेको हो ? विधिको शासन पालना गर्नुपर्छ । तपाईं–हामी सत्तामा बसेर विधिको शासन उल्लंघन गर्न मिल्दैन । म पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेको नाताले मैले निषेधित क्षेत्र अवज्ञा गरेको मलाई बोध छ, त्यसवापत मलाई तपाईंले दण्ड दिनुपर्छ । त्यसैले तपाईंले पुर्जी दिनुस र अदालतमा पेश गरेर मुद्दा चलाउनुस्, म भोग्न तयार छु । ता कि विधिको शासनको पालना होस् भन्ने मैले भनें । तर उहाँले केही पनि नभनिकन फोन राख्नुभयो । त्यसको केही समयपछि एसएसपी छविलाल जोशीले अत्यन्त कपटपूर्ण ढंगले कुरा गर्नुभयो ।
यहाँहरुलाई के सेवा गर्नुपर्‍यो ? बस्नको निम्ति के ल्याइदिनुपर्छ ? खानपिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ कि ? भनेर अत्यन्त चिप्लो घसेर अस्वाभाविक ढंगले कुरा गर्नुभयो । हामीले उहाँलाई भन्यौं – हामीलाई त्यस्तो केही सुविधा चाहिँदैन, हामीलाई तपाईंले किन ल्याउनुभएको हो त्यो भनिदिनुपर्‍यो र तपाईंको नियमकानुनले जे भन्छ त्यही अनुसार गर्नुस्, मानवीय नाताले जे गर्नुपर्छ त्यही गर्नुस् भन्यौं । त्यसपछि उहाँ गुडनाइट सर भनेर जानुभयो । यो करिव ७ बजेको कुरा हो ।
त्यसको ५ मिनेटपछि डिएसपी एसएस राथोड आएर समात केटा हो, तानओ भनेर आदेश दिनुभयो र बाघले बाख्रा झम्टेझैं गरेर हामीलाई लछारपछार गर्न सुरु भयो । अत्यन्त अपमानजनक व्यवहार भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री भएको नाताले म अत्यन्त लज्जित भएँ । तपाईंलाई हामी छोड्दैछौं, यो यो कारणले ल्याएका थियौं, तपाईंहरुको कुनै अपराध रहेनछ, तपाईंलाई छोडिदियौं भनिदिएको भए हुन्थ्यो तर त्यो पनि भनिएन । त्यसरी लछारपछार गर्ने क्रममा माननीय गंगा चौधरीजी, हिसिलाजी र हाम्रा थुप्रै साथीहरुलाई अत्यन्त अपमानजनक व्यवहार गरियो ।
हामीले भन्यौं – तपाईंले हामीलाई यस्तो गर्न मिल्दैन, विधिको शासन अनुसार तपाईंहरुले हामीलाई मुद्दा लगाउनुस । त्यो हामी भोग्न तयार छौं । हामी त्यत्तिकै जाँदैनौं, हामी चोर हैनौं । तपाईंले पिटेको भरमा, घिसारेको भरमा हामी जाँदैनौं । त्यसपछि पनि उहाँहरुले फेरि हामीमाथि बल प्रयोग गरेपछि हामीले ठान्यौं यो कुरा विश्वलाई बताउनुपर्छ । नेपाली जनतालाई बताउनुपर्छ । लोकतन्त्रको कति उपहास भइराखेको छ भनेर अहिले हामीले तपाईंहरुलाई यति कुरा बतायौं ।
हाम्रो सार भनाई के हो भने यो लोकतन्त्रको, विधिको शासनको घोर उल्लंघन भयो । जो कसैलाई पनि ल्याएर पञ्चायतकालमा, राणाकालमा कुनै अपराध गरेवापत कुनै नियमकानुन नलगाइकन कुटपिट गरेर, यातना दिएर, अंगभंग पारेर छोडिन्थ्यो त्यस्तो प्रचलन अहिलेसम्म पनि हुनु अत्यन्त लज्जाजनक कुरा हो । हामीले प्रयत्न गर्‍यौं प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई हामीले ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिइसकेका थियौं, अहिलेसम्म उहाँले हामीलाई कुनै पनि सम्पर्क राख्नुभएको छैन । उहाँले हाम्रा माग पूरा हुने नहुने केही पनि भन्नुभएको छैन । हामीले गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्‍यौं, उहाँले हाम्रा मागका बारेमा केही भन्नुभएको छैन ।
त्यसैले हामीले के देखिराखेका छौं भने देशमा प्रतिगमन डरलाग्दो ढंगले फर्केर आएको छ । हामीले लडेर ल्याएको उपलब्धी गुम्दै गइराखेका छन् । मानवअधिकारको पनि उल्लंघन, लोकतान्त्रिक अधिकार, बहुदलीय मान्यताको पनि उल्लंघन र संविधानको उल्लंघन जुन भइराखेको छ यस्तो अवस्थामा नेपाली जनता चुप लागेर बस्न मिल्दैन । अव यो विषयलाई गम्भीर राष्ट्रिय आन्दोलनको विषय बनाइनुपर्छ । त्यसैले हामीले भोलि (चैत २१) ७५ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुमा धर्ना दिने कार्यक्रम बनाएका छौं । अन्य शक्तिहरुसँग पनि मिलेर अब हामी यो देशमा सही अर्थमा बहुदलीय लोकतन्त्र, संविधानको प्रावधानको कार्यान्वयन, विधिको शासन पालना गर्नको निम्ति संघर्ष गर्छौं ।
जसले विधिको शासनको उल्लंघन, मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको छ र लछारपछार जुन गरिएको छ तिनीहरुमाथि गम्भीर छानविन गरिनुपर्छ । विधिको शासन उल्लंघन गर्नेहरुमाथि कारवाही गरिनुपर्छ । हाम्रो यो दृढ माग छ । त्यसैले म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु विषय गम्भीर छ, हामी अगाडि बढौं, हाम्रो संघर्ष जारी रहन्छ ।